Kumusoro kwerwizi, Upselling, uye Yekunze Kwekutengesa Mikana Yekukura Kwebhizinesi | Martech Zone
Kana iwe ukabvunza vanhu vazhinji kwavanowana vateereri vavo, iwe unowanzo gamuchira mhinduro nhete. Yakawanda kushambadzira uye kushambadzira chiitiko chakabatana neyevatengesi kusarudzwa kweiyo rwendo rwevatengi… Asi izvo zvatova kunyanyononoka?
Kana iwe uri dijitari shanduko kubvunza yakasimba; semuenzaniso, iwe unogona kuzadza zvese zvese muspredishiti nekungotarisa tarisiro yako yazvino tarisiro uye kuzvimisikidza iwe kumatekisheni aunonyatsoziva nawo. Iwe unogona kutsvagisa mazwi akakosha uye woisa pfungwa dzako pane injini dzekutsvaga kune avo vashandisi vari kutsvaga dhijitari shanduko agency, dijitari zano wezano, Enterprise yekumisikidza yakasimba, Etc.
Kufamba Kumusoro kwerwizi rweB2B Rwokutenga Rwendo
Hazvisi zvese nezve yako vatereri vakanangwa. Izvo zvakare nezve vatengi vako varipo, yako tarisiro 'yekumusoro chiitiko, uye kwavo kwezasi chiitiko.
Kudzokera kumashure kumuenzaniso wedhijitari shanduko yekubvunza yakasimba. Kana kambani ikawana mari inokosha yekukwidziridza musangano wavo… danho rakakosha mukuita ikoku kuri kuisa mari mukushandurwa kwedigital. Kana, kana vashandi vakakosha vakavharirwa mukati mesangano, hutungamiriri hwavo hutsva hungatsvaga kushandura ruzivo rwevatengi.
Nekudaro, kana ndiri kambani inoshandura yedhijitari, zviri mune zvandinofarira kuvaka hukama nemakambani ari kumusoro. Izvi zvinogona kusanganisira:
Venture Makambani Makuru - kupa mharidzo kune VC vatengi ingave nzira huru yekuvaka ruzivo uye kudzidzisa vanotarisira vatengi.
Kubatana & Kuwana Makambani - kupa kutsvagisa uye dzidzo kumafemu eM & A angave akanaka. Sezvo pavanosangana uye vachiwana vatengi, ivo vanozove nematambudziko ekumisikidza yavo yezviitiko zvedigital.
Magweta & maakaundendi - rimwe rematanho ekutanga anotorwa nemakambani sezvavanokwira kumusoro kushanda nevamiriri vezvemutemo nevezvemari.
Makambani Ekutora - Mabhizinesi ari kuyera kana kuve nekutendeuka muzvinzvimbo zvehutungamiriri anowanzo shanda nevashandi vekutsvaga vanhu kuunza tarenda mukati mesangano.
Ndeapi mabhizinesi aunogona kudyidzana nawo ari kumusoro kweavo vangangove vatengi?
Kupa Zvimwe Zvekuwedzera Kune Wako Vatengi Vezvino
Imwe yemeseji inoshungurudza kunzwa kubva kumutengi ndeyekuti, "Hatina kuziva kuti kambani yako yakapa izvozvo!" mushure mekunzwa nhau kuti vakasaina kondirakiti neimwe kambani.
Nhanho yakakosha pakukwiridzira mutengi wako iri kutaurirana zvese zvigadzirwa, masevhisi, uye nemikana mikana iyo bhizinesi rako rinogona kuvapa. Nekuti iwe unotova nehukama hwakasimbiswa nekambani, inogona kunge yakatonyorwa mumaaccounts avo ekubhadharisa, yatove yakatsvukirisa zvibvumirano zvebasa rako ... zvinowanzo kuve nyore kuwedzera hukama hwauinahwo navo.
Kubatana nemamwe masangano aunovimba nawo kazhinji mukana wakanaka wekuvaka kukosha uye kutotyaira mari. Isu tinotumira zviitiko nemakambani mazhinji atinoziva uye anovimba nawo kuitira basa rakakura kune vatengi vedu. Iri zano rekukunda kune vese vatengi vako uye yako wega kubuda kwemari.
Ndeapi makambani ekubatana aunoziva uye anovimba iwe aunogona kuzivisa ako vatengi kune? Iwe une zvibvumirano zvekutumira navo here?
Kuva Ruzivo Rwezasi Kune vako Vazvino Vatengi
Mushure mekupedza kuita kwedu nevatengi, ivo vanowanzo kutaurwa neanopa software kuti vataure pamisangano, kutora chikamu mune kubvunzurudzwa, uye kunyoreswa mumaindasitiri zvinyorwa.
Nekuti iwe wakapa chakasarudzika chiitiko kumutengi wako, tora nguva yekudyidzana navo pamusaruro mikana. Sangano rako rehukama neruzhinji rinofanirwa kunge richishanda kuti riwane mikana yekutaura uye rako rekushambadzira timu rinofanirwa kunge riri kuvabatsira ivo vanyori kufunga pfungwa dzezvinyorwa zvemaindasitiri.
Sezvo ivo pavanowana iwo mikana, zvinongoitika kuti kambani yako ichataurwa mune mamiriro ezvinyorwa zvavari kupa. Nekuti ivo havasi kushanda nokuti iwe kana kubhadhara by iwe, ivo vari kutaura kune vateereri sechiremera uye mushandi anovimbwa naye. Rudzi irworwo rwekukurudzira kwevatengi runotyaira kuziva kunoshamisa kune basa rauri kuita.
Iwe unogona sei kubatsira vatengi vako kusimudzira kubudirira kwavo mukudyidzana newe? Ndezvipi zviwanikwa zvaunogona kuvapa iwo munzira iyoyo yekufambisa kuzivisa kune rako bhizinesi?
Sei uchimhanyira kunzvimbo imwechete vese vakwikwidzi vako vari? Kutanga kushanda kumusoro, kuzasi kwerwizi uye pamberi pevatengi vako varipo kutyaira zvimwe zviitiko kune yako yepazasi mutsara.
Tags: b2bbrandingvatengi rwendopatanikudzikayakadzika yekushambadzirainbound MarketingKushambadzira MisanganoYeMahara neThebhu KushambadziraMobile Appsnetworkingkubatanapasocial networkcommerce inoratidzanechokumusoro kwerwizikumusoro kwekushambadziraWebinars
Sqribble: Dzvanya, Dhizaini, uye Shambadza Eko Ebook, Case Study, kana Whitepapers muMaminetsi